Shiinaha Gawaarida Ultimate Transducer Falanqeeyaha Qalabka Cabbiraadda Qalabka Halbeegyada Soo-saaridda iyo Warshad | Qianrong
Qalabaynta Cabbiraadda Qalabka Cabbiraadda Cabbirka Cabbirka Qalabka Halbeegga
La qaadan karo, shaashadda 8inch, Shaashad taabasho buuxda
Dhammaan xuduudaha, garaafka
5s / hal marin （600barta iskaanka）
10 ～ 40 meelood meel dhexe
Falanqeeyaha Ultrasonic analyzer QR520A taxane ah oo loogu talagalay noocyada kala duwan ee aaladaha ultrasonic si loo qiyaaso walxaha, oo ay ku jiraan dhoobada loo yaqaan 'piezoelectric dhoobada, transducers, makiinadaha nadiifinta ultrasonic, mashiinka alxanka caaga ah ee loo yaqaan' ultrasonic, acoustic, qalabka magnetostrictive, Furimaha Xiinka, ultrasonic atomization, nadiifinta ultrasonic, dib u celinta radar, Xiisadaha ultrasonic, fakoemulsification, nadiifinta ultrasonic, matoorrada ultrasonic, iyo dhammaan isticmaalka qalabka loo yaqaan 'piezoelectric' iyo ultrasonic iyo qalabka.
1. Shaashad ballaaran, taabasho shaashad buuxda leh, sameynta QR520A labadaba QR70A-P (nooca kumbuyuutarka) khibrad shaqo, iyo culeys la'aan leh dareenka hawlgalka kombiyuutarka.
2. Waxay ku tiirsan tahay awoodda wax-qabadka xogta processor-ka cusub ee awoodda badan leh, QR520A saxnaanta cabbiraadda ayaa aad uga badan tan QR70A-D (oo leh muuqaalka muuqaalka), waxay gaari kartaa heerka QR70A-P (nooca kumbuyuutarka).
3. Hawlgalka taabashada shaashadda buuxa ayaa ah mid adeegsad ahaan u fiican, mar dambe uma baahna QR70A-D (nashqad u gaar ah) tiro badan oo badhanno muuqaal ah, sidaa darteed qalabka hawlgalku wuxuu noqonayaa mid aad u fudud, cabirka wax soo saarku wuu yar yahay, wuu fudud yahay waana la qaadi karaa.
4. Ku xiridda kumbuyuutarka si ay ugu shaqeyso sidii QR70V-P. Software-ka si buuxda ayuu ula jaanqaadi karaa, isticmaalehu mar dambe aqoon uma leh hawlgalka barnaamijka.
1. Jaamacadda Tsinghua iyo Akadeemiyada Shiinaha ee Sayniska Machadka Acoustics waxay si wadajir ah u horumariyeen tikniyoolajiyadda.
2. Laga soo bilaabo 2001, taxanaheena QR60A / 70A ee alaabooyinka ee suuqyada ayaa ahaa 15 sano, kumanaan macaamiil ah ayaa u adeegsada warshadaha, waxay noqotay arrin xaqiiqda ah cabirka warshadaha ultrasound.
3.15kii sano ee la soo dhaafay, in ka badan 200 kulleejo iyo jaamacado ayaa adeegsanayay qalabkeenna, maxaa yeelay waxay badanaa haystaan ​​in ka badan 20,000 oo qalab Agilent ah, 4294A. Qalabkeena waxaa marar badan lagu tijaabiyay aaladaha Agilent ee laga keeno dalka. Waxay soo baxday in natiijooyinka qalabkeennu gabi ahaanba lagu kalsoon yahay.
4. Qalabkeena waxaa adeegsaday shirkado badan oo Jarmal iyo Mareykan ah oo tijaabiya qalabka ultrasonic. Qalabku waa furaha xakamaynta tayada. Haddaan dooranno qalab Shiinaha lagu sameeyay. Waa inaan ku dhisnaa iyaga oo ku saleysan kalsooni buuxda.
Hore: 40Khz Ultrasonic Nano Spray Device leh Beddel Frequency Sare Dhaqan-buufinta Labada-dareere
Xiga: 20Khz Ultrasonic Customized Alxanka Horn la Daaweynta Anodizing
3000W Alxanka kululeeyaha Hot-dhalaalida Hot of End caaga ...